Uppdaterades 29 jun 2022 15:00
Tallaalku waxa weeye habka ugu wax ku oolsan ee looga hortagaayo in si xun loogu jirado ama Covid-19 loogu dhinto.
Carruurta ay da'doodu u dhaxayso 12 iyo 17 sano ayaa loo soo jeedinayaa oo laba doos oo tallaalka covid-19 ah. Gobol kasta isaga ayaa go'aaminaaya sida uu u maareynaayo oggolaanshaha marka carruurta aan wali qaan gaarin la tallaalaayo.
Carruurta kooxaha qaar aadka ugu nugul caabuqyada hawomareenka ka tirsan ayaa loo soo jeedinayaa inay laga bilaabo da'da 5 sano jirka covid-19-la iska tallaalaan.
Dadka waaweyn ayaa saddex doos loo soo jeedinayaa
Waxa dadka waaweyn ee ay da'doodu u dhaxayso 18 iyo 64 sano loo soo jeedinayaa saddex doos oo tallaalka ah. Xilliga deyrta ee 2022 ayuu qofkii doonayaa qaadan karaa doos kale oo dheeri ah oo lagu kaabaayo, doos afaraad.
Dadka waayeelka iyo dadka khatarta ugu jira
Dadka ay da'doodu 65 sano tahay iyo wixii ka weyn iyo sidoo kale dadka khatarta ugu jira ee 18 sano jirka laga bilaabo ayaa doos kaabis ah loo soo jeedinayaa, doos shanaad, oo loogu talogalay Covid-19. Waxa ay talobixintu shaqeynaysaa laga bilaabo 1 Sibtembar 2022.
Tallaalka lagu isticmaalo Iswiidhan